Koox ay Taageerayso Dawlada Somaliya oo Dagaal ka Bilaabay Kismyo – Rasaasa News
Koox ay Taageerayso Dawlada Somaliya oo Dagaal ka Bilaabay Kismyo
Jun 7, 2013 Koox ay Taageerayso Dawlada Somaliya oo Dagaal ka Bilaabay Kismyo
Kismayo, June 7, 2013 – Warar naga soo gaadhay magaalada Kismaayo, ayaa sheegaya in dagaal maanta ka dhacay magaalada Kismaayo ay ka damayso dawlada Somaliya.
Dagaalkan oo sida la sheegay ay ku dhinteen 7 ruux ayaa saaka ka bilowday magaalada.
Dagaalkan ka dhacay magaalada Kismaayno oo la saadaalinayey, ayaa ah mid ku tala gal ah oo ay ka dambayso dawlada Somaliya. Waxaana magaalada Kismayyo ku sugan masuuliyiin 30 xubnood ah, kuna jiraan wasiiro ayaa u jooga Kismaayo kaliya in dagaal ka dhaco.
Waxaa la rumaysan yahay in dagaalka maanta ka dhacay Kismayo ay lug wayn ku leeyihiin masuuliyiinta dawlada Somaliya ee Kismaayo ku sugan mudada badan, noqotayna hawshoodu in ay dagaal ka huriyaan Kismaayo.
Dagaalka ayaa dhacay xil ay booqasho ku joogaan magaalada Nairobi, qaar ka mid ah masuuliyiinta ugu saraysa maamulka Jubaland.
Masuuliyiinta dhawra ah oo uu ka mid yahay madaxwaynaha Somaliya, ayaa si hal haleel ah uga hadlay dagaalka ka dhacay Kismaayo, arintaas oo muujinaysa in ay sugayeen dagaal dhaca sida la rumaysan yahay.
In kasta oo dagaalkii maanta ka dhacay Kismaayo ay soo af jareen ciidanka Jubaland, hadana waxaa cabsi laga qabaa in ciidamo ka yimaada Muqdisho ay soo xoojiyaan kooxda dagaalka ka bilowday Kismaayo.
Fawsiya Xaaji Aden: Ha Loo Daayo Arimaha Jubaland Somaliya
Xassan Sheekh Maxamud oo Xalay ka Dhoofay Ingriiska